MAQAAL: In Jurgen Klopp & Liverpool Ay Burbur U Keeni Karto Guuldaro, In Jamaahiirta Arsenal Ay Ka Qixi Doonto London, Jamaahiirta Chelsea Oo Europa League La Xishoon Doona Iyo Dhacdooyinka Suurtogalka Ah Haddii Ay Tottenham Ku Guulaysato Champions League. - Gool24.Net
MAQAAL: In Jurgen Klopp & Liverpool Ay Burbur U Keeni Karto Guuldaro, In Jamaahiirta Arsenal Ay Ka Qixi Doonto London, Jamaahiirta Chelsea Oo Europa League La Xishoon Doona Iyo Dhacdooyinka Suurtogalka Ah Haddii Ay Tottenham Ku Guulaysato Champions League.
Liverpool ayaa xili ciyaareedkii labaad oo xidhiidh ah iskeentay finalka UEFA Champions League kadib markii ay 12 bilood ka hor guuldaro kala kulmeen Real Madrid, wuxuuna Jurgen Klopp doonayaa in xanuunkii kulankaas uu dhiiro galin uga dhigo ciyaartoyda kooxdiisa.
Tottenham ayaa markii ugu horaysay taariikhda kooxdeeda waxay soo gaadhay finalka Champions League waxayna wax walba u samayn doonaan in ay koobkanku guulaystaan.
Inkasta oo aragtida aduunka kubbada cagta ay Liverpool tahay kooxda loo saadaalinayo in ay ka soo kabsan doonto qalbi jabkii finalkii Champions league ee xili ciyaareedkii hore haddana wax walba ayaa ka dhici kara kulan final ah.
Haddii ay Liverpool ku guulaysato koobka UEFA Champions League uma saamayn waynaan doonto sida haddii ay Tottenham koobkan ku guulaysato sababtoo ah xajmiga labada kooxood iyo taariikhda ay kala leeyihiin.
Haddii ay Liverpool ku guulaysato koobka Champions League waxa uu noqon doonaa koobkoodii lixaad ee Champions League, wax cusub ma noqon doonto in la arko Liverpool oo sare u qaadaysa koobka Champions League maadaama oo ay tahay kooxda ugu guulaha badan ee Egland marka ay noqoto tartamada Yurub.
Laakiin haddii ay Tottenham ku guulaysato koobka Champios league waxa uu noqon doonaa wax cusub oo waliba dad badan qariib ku noqon kara maadaama oo ayna Spurs ka mid ahayn kooxihii xataa loo saadaalinayay in ay finalka tartankan soo gaadhaan.
Haddaba maxay yihiin dhacdooyinka kubbada cagta qabsan doona haddii ay dhacdo in Liverool ay guuldaro kale ku soo gaadho finalka Champions League?:
Shabakada Gool24 ayaa halkan idiinku soo gudbinaysa arimaha waa wayn ee dhici kara haddii ay Liverpool guuldaro kale ku soo gaadho finalka Champions league oo ay Tottenham koobkan qaado.
1- Haddii Ay Tottenham Ku Guulaysato UCL, Jamaahiirta Arsenal ayaa ka qixi doona London!
Haddii ay dhacdo in ay Tottenham ku guulaysato koobka UEFA Champions League waxay dhibaatada ugu wayn ku noqon doontaa kooxda Arsenal oo ay London daris ku yihiin isla markaana uu xifiltan wayni ka dhexeeyo.
Arsenal waxay haddaba la jiiftaa guuldaradii iyo murugadii finalkii Europa League, laakiin haddii arkaan Tottenham oo London kula soo socota koobka dhegaha wayn ee Champions League waxay abuuri kartaa bara bax iyo qax ka dhici doona goobaha lagu kaftamo ee London.
Jamaahiirta Tottenham iyo Arsenal waxaa ka dhexeeya xifiltan wayn waxayna waqti badan Spurs ku soo hoos jirtay hooska ama hadhka Arsenal iyaga oo xataa ku soo dhibtoon jiray in ay ku dhamaystaan meel ka saraysa Gunners.
Laakiin hadda sheekadu way isbadashay waxayna Tottenahm noqotay kooxda soo gaadhay finalka Champions League waxayna arinta ugu xumi noqon doontaa in ay Arsenal aragto iyaga oo Europa League soo guuldaraystay iyo Tottenham oo koobka Champions league ku guulaysata.
Sidaa daraadeed, jamaahiirta Arsenal waxay caawa si buuxda u taageeri doonaan Liverpool si ay goobaha lagu qaxweeyo iyo goobaha kabtanka ugu nagaan karaan oo ay Tottenham ugu soo dhawayn karaan iyaga oo guuldaro isku mid ah xambaarsan.
Kooxaha kale sida Arsenal iyo Man United sax ayaad ka sheegtay laakin Chelsea lama mid aha oo Champions League horay ayey u qaaday, marka loo fiiriyo Arsenal. Haddana Tartanka Chgampions League xilligan kama ciyaareyn oo Europe League ayey Jirtay waana ku guuleysatay. Tottenham oo qaadda waxa keliya ee aad dhihi kartaa waa in Chelsea Qarash suuqa ku bixisay Tottenham na aysan bixin.